May 2014 - Websetnet
Volana: Enga anie 2014
Ny tanjon'ny bilaogera Lazy amin'ny Super Charge WordPress amin'ny 100 + Plugins
Manontania tena fanontaniana iray, "Bilaogera rambona be rizareo?". Na dia tsy izany aza dia hitondra anao any amin'ny evolisiona manaraka ho an'ny bilaogy WordPress ireto plugins ireto izay hanova ny fomba fitorahanao bilaogy. "Nahoana ianao no mila plugins?". Satria, WordPress no tsara indrindra sy ...
Ny Native Win32 Linux Commands ho an'ny Windows 7
Izaho dia nikaroka fotsiny ny tranonkala mba hitady ny mitovy amin'ny baiko Linux mikasika ny Windows 7 ary nipetrapetraka tamin'ity volkano ity. Vondron'ireo tompon-tany Linux Win32 Linux! Safidy tsaratsara kokoa noho i Cygwin ny fandefasana ny programa amin'ny teny teratany (io teny io indray) ...
Hanova ny Logo amin'ny WordPress Login Page
Ny pejin-tranonkalan'ny WordPress-blôginao dia maneho ny logo of WordPress, raha tianao ny manova izany amin'ny alalan'ny tenanao manokana, azonao atao izany amin'ny fampidirana ilay code eto ambany ao amin'ny fonts fonctions functions.php. Hanova ny "/yourimageurl/logo.jpg" miaraka amin'ny URL-nao logo, tsy mila ...
Ahoana ny fametrahana Tomcat 8 amin'ny CentOS 6 VPS
Amin'ity lesona manaraka ity dia hianatra ny fomba fametrahana sy fametrahana Apache Tomcat 8 amin'ny CentOS 6 VPS ianao. Inona moa i Tomcat? Apache Tomcat (aloha fantatra amin'ny anarana hoe Jakarta Tomcat) dia server mpanolotra iray novolavolain'ny Apache Software Foundation izay manatanteraka ny servlet Java ary mamoaka ...
Ny Fanontanianareo Momba ny Fitadiavam-bola Ataonay Anio
Nanontany i George ... Ahoana no ahafahako mahazo fiainana an-tserasera haingana? Vahaolana Martin King: Tsapako fa tsotra izao izany mba hahazoana tombontsoa an-tserasera rehefa mahatratra ny fahaiza-manaony, mahafantatra ny mety sy ny fitaovana ilaina mba hahazoana tombontsoa an-tserasera. Ny hahazoana vola haingana dia mora toy ny dokam-barotra.
Fanontaniana momba ny WordPress Admin Login
Mangataka i Charles ... WordPress.org olana (adiresy admin-adiresy URL tsy miasa - Tadiavo azafady? Hey eo, ny tranonkalako dia badbhabhi.com ary nampiasa http://badbhabhi.com/wp-admin aho mba miditra an-tsipelina izay alefa any amin'ny http://badbhabhi.com/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fbadbhabhi.com%2Fwp-admin%2F&reauth=1 ary tsy mahalala hoe nahoana aho no namoaka ny bilaogy Custom Community ho an'ny bilaogiko mampiasa ...
Fanontaniana momba ny Linux Server Configuration Tutorial
Manontany i Paul ... Ny mpanorina ny LDAP Server sy ny lesona? Salama daholo izay tiako ho fantatra momba ny LDAP (Light Weight Directory Access Protocol) ny fampiasana azy, ny maha-zava-dehibe, ny fampiasana sy ny fomba fananganana ny server LDAP ao amin'ny Redhat Linux, azafady azafady ary raha misy manana fampianarana na dokam-barotra momba ny loha-hevitra etsy ambony.
Ny fanontanianao momba ny tranokala fananganana tranokala
Manontany i John ... te-hamorona tranonkala mitovy amin'ny ebay aho? Salama daholo, tena te hanangana tranonkala iray aho izay ahafahan'ireo olona manangona zavatra sasantsasany ary hampiroborobo ny orinasa eo an-toerana. Tsy manana traikefa fandaharam-pianarana aho ary tsy te hiditra ao, ka inona no ...
Ny fanontaniana momba ny paikady ara-barotra Digital
Manontany i Donald ... Manan-kevitra momba ny paikady momba ny varotra dizitaly? Afaka manome ahy hevitra momba ny tetikady nomerika dizitaly ve aho? Mamaly i Martin King: Ny fe-potoana tena izy. Ny marketing ara-dizitaly dia ahitana SEO, SEM, Email Marketing, Ad Sense. Mikasika ny tetikady, miankina amin'izay takian'ny tranonkala izany. I ...
Ny fanontanianao momba ny Tutorial fananganana tranokala
Manontany i Robert ... Mila fanampiana amin'ny dokam-barotra ny tranokalako, tsy mahazo mpitsidika ampy. Soso-kevitra rehetra? Mamaly i Martin King: Ny fitaterana ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao dia mitaky ny fametrahana metatages SEO. Ny fanatontosana ny fikarakarana maotera avo lenta dia hitondra ny fifamoivoizana Net amin'ny tranokalanao. Mihevitra isika fa manana ...
Ahoana no fametrahana ImpressCMS amin'ny CentOS 6 VPS
ImpressCMS dia maimaimpoana maimaim-poana sy fanamafisana ny fitantanana ny votoatin'ny tranonkala natsangan'ny fiaraha-monina Ity PHP fototra CMS ity dia mahatonga ny tranokala sy ny fitazonana tranonkala mihetsika ho mora sy haingana. ImpressCMS dia rafitra mahery iray izay vahaolana tonga lafatra ho an'ny mpampiasa maro. ...
Afeno ny sary (attachments) avy amin'ny Search Results
Raha dikan-teny, WordPress dia ahitana ny karazan-tsoratra rehetra ao amin'ny pejy valin'ny fikarohana. Anisan'izany ny lahatsoratra, ny fitaovana, ny pejy ary ny hafa. Ohatra, raha mitady ny teny hoe 'Wordpress' amin'ny tranonkalan'ny WordPress, izay manana ny safidinao, dia ny karazan-dahatsoratra rehetra misy ny teny hoe 'Wordpress' dia ...
Ireo Plugins Top Slideshow ho an'ny WordPress
Moa ve ianao efa nitady fomba hanampiana slideshow lisitra ao amin'ny tranonkalanao WordPress? Ny fampisehoana sary ao amin'ny tranonkalanao WordPress dia zavatra iray, ny fahafahana mampiseho azy ireo amin'ny sarimihetsika mahafinaritra dia iray hafa. Misy plugin maro samihafa any ...
Ahoana ny fametrahana Gallery3 amin'ny Ubuntu 14.04 LTS VPS
Ny lahatsoratra manaraka dia hitarika anao amin'ny alalan'ny dingana amin'ny fomba fametrahana Gallery3 eo. Inona ny Gallery3? Izy io dia loharanom-pifandraisana mivantana amin'ny tranonkala, mifototra amin'ny PHP sy MySQL. Gallery3 dia manana fitantanana ny fitantanana sary an-tsary ary azonao ampiasaina ao anatinao.
Ahoana ny fomba fanaovana Magento Store SEO Friendly ao amin'ny 10 Dingana
Magento dia sehatra malalaka ecommerce, kanefa dia mijaly noho ny tsy fisian'ny SEO optimisma. Soa ihany, miaraka amin'ny paikady vitsivitsy sy ny fampitomboana roa, dia ho afaka hanatsara ny fivarotam-bokinao ianao mba ho lasa sehatra SEO. 1. Ampiasao ny URL ...
Ny Plugins Best Word ho an'ny RSS Feeds
Ny fisehon'ny fehezan-tsidin'ny RSS ao amin'ny tranonkalanao WordPress dia fomba tsara iray hanolorana ireo vahiny miaraka amin'ny fanampiana hyperlinks amin'ny fampahalalana samihafa. Ampiasao ny fepetra RSS amin'ny tranonkala samihafa mba hampisehoana fampahalalana na lahatsoratra amin'izao fotoana izao mametraka ny lohahevitra mitovy amin'ny weblog na tranonkala. Na inona ...
Tokony hampiasa ny Nofollow aho rehefa mifandray amin'ny IP mitovy?
Ny rohy dia ny lalambe, ny fifandraisana Google dia mampiasa ny famaritana ny fifandraisana eo amin'ny pejy. Pejy tsy ahitana takelaka misy aterineto tsy hita maso; Tsy afaka aseho izy mandra-panaisotra avy hatrany. Ny rohy dia ny fomba hita amin'ny pejy, ny fomba fijerin'ny mpanjifa azy sy ny fomba iasany.
Ahoana no fomba hitadiavana ireo mpanafika ao amin'ny Twitter?
Iza ireo zava-dehibe amin'ny mpandraharaha ao amin'ny orinasa ao amin'ny Twitter izay te-hirotsaka an-tsehatra fotsiny? Ny tambajotra amin'ny olona manana mpijery mahay, ary ny mpijery no mandinika ny zavatra lazainy, dia mety hanampy anao indrindra, rehefa ny mpijery anao dia ...
Inona no fahasamihafana eo amin'ny manam-pahefana sy ny PageRank?
Ny fandrefesana roa amin'ny tranokala indraindray dia natsangana ho toy ny filazalazana ilaina ao amin'ny tranokalanao mba hiasa bebe kokoa. Iray amin'ireny ny Google-noforonina sy nohamarinina PageRank. Ny fahasamihafana dia ny fahatelo-fankalazana Moz creation, Domain Authority. Inona no mitranga amin'ny fandrefesana izany?
Antony 44 mahatonga ny olona tsy matoky ny tranonkalanao
Nahoana ny olona no matoky - na tsy fifampitokisana - tranonkala iray? Ahoana ny momba ny votoatin'ny votoaty, ny fanapahan-kevitra momba ny famolavolana, na ny fampiasana ny tranonkala iray izay mahatonga azy ho tsy mendrika? B. Manao asa be loatra Misy fanazavana be dia be ve? Is it ...
1 2 3 4 ... 16 Manaraka